Kabsado iPhone MMS
Xayiran Sababaha keenaya iPhone on Apple logo shaashadda: Qeybta 1
Qeybta 2: Hagaaji arrinta logo screen Apple gacanta
Qeybta 3: U dayactir "iPhone ku xayiran on Apple logo" oo aan laga badinin Data
Xayiran Sababaha keenaya iPhone on logo screen Apple ah: Qeybta 1
1. Ka dib markii lagu casriyeeyo si macruufka 9 aad iPhone.
2. Ka dib markii jailbreaking aad iPhone.
3. Ka dib soo celinta aad iPhone ka Lugood ama iCloud.
4. Ka dib markii arrin halka rakibidda update ama fulinaya si joogto ah loo soo celiyo.
Marka iPhone waxaa ku xayiran on logo screen Apple ah, waxaa sii dayn doonaa inaad meel laakiin dhankeena on isla Apple logo shaashadda mar walba tago. Haddii aad doonaysid in aad sii waddo isticmaalkooda aad iPhone, waxaad u baahan tahay inaad ogaato habka ah in u sameeyeen. Next, aynu hubi jidadkiisa oo dhan suurto gal wada hoos ku qoran.
Qeybta 2: Hagaaji arrinta Apple logo shaashadda gacanta
Sida caadiga ah, waxaad hagaajin kartaa arrintan gacanta keligaa, haddii ay jirto wax dhibaato ah oo kale oo aad iPhone. Si kastaba, tani ma aha wax waxyeello u leh iPhone (macruufka 9) samayn doonaa. Raac tallaabooyinka hoose oo la sameeyo iPhone aad talaabooyinka sallaan.
Tallaabada 1. Riix badhanka Power iyo button Home ku saabsan iPhone waqti isku mid ah. Talaabada 2. Marka shaashadda tagaa madow, isla markiiba sii daayo labada badhamada. Tallaabada 3. Markaas cadaadin batoonka, ilaa logo Apple ka soo booda, iyo hadda waxaad sii daayo karaa batoonka.
Dhowr ilbiriqsi ka dib, aad iPhone la billaabeen doonaa. Haddii uu dib u caadi ah ka dib markii howleheedii, aad go'an arrinta hadda. Waxa kale oo aad ka daawan kartaa oo raac tilmaan-video hoose, haddii aad rabto.
Weli heli aad iPhone ku xayiran on logo screen Apple ah? Waxaad ka badalan karaa hab hadda. Isku day Wondershare Dr.Fone ee macruufka (Mac iPhone Data Recovery) ama Wondershare Dr.Fone ee macruufka (iPhone Data Recovery (Windows), kaas oo sidoo kale keeni kartaa iPhone ka shaashadda logo Apple caadi ah dib u. Marna aad u baahan tahay in la soo celiyo aad iPhone oo keeni arin kasta khasaaro xogta. Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka fudud si uu u xaliyo "iPhone ku xayiran on Apple logo". iyaga Fiiri.
Tallaabada 1. Download iyo rakibi Wondershare Dr.Fone ee macruufka
Download iyo rakibi Wondershare Dr.Fone ee macruufka on your computer. Ka dib markaas, waxaa isla markiiba abuurtaan. Ka dib markaas, xiriiriyaan iPhone (macruufka 9 taageeray) in kombiyuutarka la cable USB ah.
Tallaabada 2. Dooro "Dayactir Operating System"
In uu furmo suuqa ugu weyn ee Wondershare Dr.Fone ee macruufka, riix "Dayactir Operating System" tab ee xaq u sareeya. Ka dibna waxaad arki kartaa qaar ka mid ah qoraalada diaplayed uu furmo. Haddii aad qabto wax dhibaato ah kuma qabo dhammaan isbeddellada ku keeni doonaa, guji "Next".
Muhiim: Fadlan la soco in ay si qamaar arrinta - iPhone xayiran Apple logo, nidaamka qalliinka macruufka aad iPhone la cusbooneysiin doonaa in nooca ugu dambeeya. Oo neefku hadduu yahay iPhone xabsi-jebiyey, ka dibna waxa la cusbooneysiin doonaa si ay u ma jiro xabsi-jebiyey.
Tallaabada 3. Download firmware rasmi ah
In uu furmo suuqa cusub, ka link firmware download rasmi ah aad iPhone waxaa la siin doonaa. Waa in aad kala soo bixi firmware ah. Haddii aad ka hor waxa ay soo bixi, markaa halkan kaliya aad u baahan tahay inaad doorato "Durba soo bixi" xitaa your computer si aad u heshaan.
Tallaabada 4. Fix iPhone ku xayiran on Apple logo
Ka dib markii ay soo degsado iyo xulashada firmware rasmiga ah ee aad iPhone (macruufka 9 taageeray), waa in aad riix batoonka "Fix bilow" si aynu barnaamijka si uu u xaliyo arrinta aan caadi ahayn oo aad u. Ka dib markaas, waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay sugto aad iPhone guuleysatey. Waxaad arki kartaa in iPhone ay shaqadeeda bilowdo oo aan wax dhibaato ah.
Isku day Wondershare Dr.Fone ee macruufka si uu u xaliyo xayiran iPhone on Apple logo arin!
Sidee si ay u gudbiyaan Xiriirada ka Android inay iPhone
9 Waa Dos Marka Helitaanka A New iPhone
> Resource > iPhone > [Issue go'an] iPhone ku xayiran garoonka Logo Apple ee Screen